တင်ဒါအသိပေးချက် - L = 2.319 မီတာTavşanlı - Tunçbilekလိုင်းရှိTunçbilekဘူတာရုံရှိလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းအတွက်တင်ဒါ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Tavşanlı - လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ L ကိုမှာ Tuncbilek လိုင်း Tuncbilek လယ်ပြင်ဘူတာ = 2.319 မီတာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Tavşanlı - လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ L ကိုမှာ Tuncbilek လိုင်း Tuncbilek လယ်ပြင်ဘူတာ = 2.319 မီတာ
26 / 09 / 2012 လေလံပွဲ, လောက, မီးရထားလိုင်းထောက်ပံ့ရေးအလုပ်လုပ်တင်ဒါ, အထွေထွေ, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, တည်ဆောက်နေလေလံ
TC STATE ရထားလမ်းလေလံပွဲ
Timurbog မှအန်နဝါ: လေလံပွဲတာဝန်ရှိသည်
လေလံ Manager ကိုဖုန်းနံပါတ်: 02722137621 / 4309
လေလံ Manager ကိုဖက်စ်: 02722141943
Ilan နေ့စွဲ: 26.09.2012 00: 00: 00
specification ကုန်ကျစရိတ်: £ 100,00
နူးညံ့သောဘာသာရပ်: အလုပ်လုပ် Yapim
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 2012 / 127172
TAVŞANLI - TUNÇBİLEK FIELD LINE အတွက်TUNÇBİLEK GAR
လမ်းကိုအောင် L ကို = 2.319 မီတာ
STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးတူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) သမ္မတနိုင်ငံ
7 ။ ဒေသန္တရရုံးထောက်ပံ့ရေး
ယုန် - ၌ပြစ်မှားမိ Tuncbilek ဘူတာ Yard လိုင်း Tuncbilek L ကို = အမှတ် 2.319 4734 မီတာလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 127172
က) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ ကျီတစ်ခု CAD ။ 03030 AFYONKARAHİSARဗဟို / AFYONKARAHİSAR
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621 - 2722141943
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ငါ့အ tcddihalekomisyonuafyon@mynet.co
က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: စာချုပ်၏သဘောသဘာဝ, နုစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပါရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များအနေဖြင့်ဝင်ရောက်တည်ရှိသောအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကို (အီလက်ထရောနစ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပလက်ဖောင်း) ကိုရည်မှတ် ECAP နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ။
ခ) Place: TCDD KÜTAHYA Tuncbilek Gara သင်တန်းအမှတ်စဥ်
အဆိုပါပေးပို့တည်နေရာ (ခုနစ်-ငါး) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှ 75: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
က) Place: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား Alicetinkaya Mah ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ GAR / AFYONKARAHİSAR
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 11.10.2012 - 15: 30
4 ။ အဆိုပါအခြေအနေများနှင့်စံလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအရည်အချင်းများအကဲဖြတ်များအတွက်တင်ဒါဖို့အသုံးပြုခံရဖို့:
အလုပ်ကန်ထရိုက်မှဘာသာရပ်အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ် xnumxihal ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ။ သို့သျောလညျးမဟုတျဘဲအပေါငျးတို့သအလုပ်ကန်ထရိုက်ရန်။
အဆိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိကတိကဝတ်များ 50% နှုန်းထက်မနည်းများအတွက်စာချုပ်အလုပ်သို့မဟုတ်အလားတူအလုပ်၏ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဖေါ်ပြခြင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်တဆယ်ငါးနှစ်အတွင်းစျေးနှုန်းင်တစ်ဦးစာချုပ်အဆိုပြု,
ဒီတင်ဒါတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်အလုပ်; အလားတူလုပ်ငန်းအုပ်စု Communiques (နောက်ဆက်တွဲ-1) တွင်အမှုတော်တို့ကို A-VI ကိုအုပျစုမှာသို့မဟုတ်ဤအုပ်စုများ၏အလုပ် ပတ်သက်. အဖွဲ့များစာရင်းအလားတူအလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်လုပ် '' ကောင်းစွာအခွအေနေက "ဒါအပေါ်ပြီးစီး, ပြုပြင်ခြင်း, တူးဖော်ခြင်း, အားဖြည့်, installation ကိုအလုပ်နှင့်။ " ဂျော့ဘ် ဒါဟာအလားတူအလုပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
6 ။ ပြည်တွင်းလေလံကိုသာတင်ဒါတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်။
7 ။ နုစာရွက်စာတမ်းများ၏ဝယ်ယူ:
7.1 ။ အဆိုပါတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးရေးရာxnumx.bölgလိပ်စာ၏ Teller TCDD ညွှန်ကြားမှုထံမှငွေနှင့်ဝယ်နိုင်ပါသည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် 100 ကွိုးစားပါ (တူရကီလိုင်ရာ) မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
8 ။ လက်, လိပ်စာတူအမှာစကားပြောကြားသို့မဟုတ်မေတ္တာရပ်ခံမှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်ပြန်လာလက်ခံရရှိကနေတဆင့်လှေတျတျောမူမညျအကွောငျးအဖြစ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်သမ္မတ GAR / AFYONKARAHİSAR၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုရန်နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုတက်လေလံစျေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ။
9 ။ လေလံလေလံကစိမ်းပေါင်းလဒ် turnkey အခြေခံထွက်ကိုငါပေးမည်။ စိမ်းပေါင်းလဒ် turnkey စာချုပ်အပေါ်နူးညံ့သောဆုံးဖြတ်ချက်နုနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။ ဒီတင်ဒါမှာ, တပြင်လုံးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တင်သွင်းလိမ့်မည်။
10 ။ လေလံသူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်စျေးနှုန်း၏မလျော့နည်း3ထက်% ဆုံးဖြတ်ခံရဖို့ပမာဏကိုအတွက်လေလံနှောင်ကြိုးတင်ပြရမည်။
11 ။ နူးညံ့သော (တရာနှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ကာလ၏နေ့စွဲကနေလေလံ၏တရားဝင်မှုကာလ, 120 ။
12 ။ Consortia တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
13 ။ အခြားကိစ္စရပ်များ: န့်သတ်ချက်များမြှောက်ဖော်ကိန်းနု (N) တို့အတွက်လျှောက်ထားခံရဖို့: 1,20
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (Karaisalıbucağı-Durak Stations ... )
တင်ဒါကြေငြာချက် - သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆေးဖြန်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံလိမ့်မည် (TCDD Tavsanli and Tunçbilek…
တင်ဒါခေါ်ယူမှု - မီးရထားလမ်းစွန်းတွင်မီးဘေးကာကွယ်ရေးအစဖွင့်လှစ်ခြင်း (Demirciören ?? …
တင်ဒါအသိပေးချက် - Eskişehir-Konya လိုင်းPınarbaşıဘူတာရုံ ၂ L = ၁၀၁၆ မီတာ New İhale
Kütahya Tuncbilek Gara အပိုခင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ခေါ်ဆောင်သွား
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘူတာ Yard Lighting Installer ၏ Tuncbilek သက်တမ်းတိုး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Alayunt-Balikesir ဘူတာ Yard လိုင်းTavsanlıလူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းYaptırılacaktır
တင်ဒါအသိပေးချက် - Tavşanlıဘူတာ၊ Gar ရှိအဆောက်အအုံအားလုံးကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊
ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ Sekapark-line ကိုရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံ 50 မီတာအတွက်တစ်နေ့လျှင် 100 မီတာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Halkalı Bond Logistics Directorate ındaki
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၃၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်၊
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: နိုဝင်ဘာလ 16 1933 Fevzipaşa-line ကို Diyarbakir xnumx.km အတွက် Baskil ရောက်ရှိ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: DE 24000 16 အမျိုးအစားစုစုပေါင်းပျက်ယွင်းနေမော်တာပြုပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဂီယာစနစ်၏ဝယ်ယူဘို့7ကလောင်နူးညံ့အပါအဝင်တပ်ဆင်ပစ္စည်း